Murashaxiinta ?Kor-meerayaal caalami ah waa muhiim in la helaa wakhtiga doorashada Puntland? – Radio Daljir
Oktoobar 30, 2013 4:40 b 0
Galkacayo, October 30, 2013 – Murashaxiinta magacyadoodu hoos ku taxan yihiin waxay u tartamayaan xilka madaxweynaha dawladda Puntland marka la gaaro doorashada ku muddaysan in ay dhacdo 8da bisha Jannaayo ee sannadka 2014. Ka dib markii ay in muddo ah wadar ahaan u qiimeynayeen xaaladda dhaqaale, amni iyo siyaasadeed waxaa u wada muuqatay in ay Puntland soo food saartay xaalad khatar ah oo ay tahay in dadkeedu ka badbaadiyo.
Tan iyo maalinti xafiiska loo dhaariyey, madaxweyne Cabdiraxmaan dadaalkiisa oo dhan wuxuu isugu geeyey sidii uu ugu raagi lahaa madaxweynenimada. Sannadki dheeraadka ku ahaa xilli xakuumadeedki
rasmiga ahaa iyo abaabuliddi dorashooyin golayaasha degaanka, ayada oo aanay jirin ururro siyaasadeed oo ku tartamaya, waxaa loogu googol-xaareyey doroorasha madaxweyne oo ah run ahaanti ?nin dooran doorta?.
Qabsoomiddii shirweynihii asaasidda Puntland waxaa guddoomiyey Isimmada Puntland. Waxaa kaloo ay tahay in la is-xusuusiyo in doorashadii labaad iyo tii saddexaad ay adkaan lahayeen inay qabsoomaaan haddii anayn Isimadu faragelin ku samayn xiisadihii siyaasadda ee jirey. Maa daama aan weli lagu guuleysan in Puntland u tallawdo tartan xisbiyo badan, mar kasta oo loo noqdo habka ku dhisan qaab beeleedka, waa Isimmada kuwa go?aaminaya qofka noqonaya xildhibaan Golaha shacabka. Arrimahaas oo dhan waxay ka marag kacayaan in mas?uuliyadda ugu dambaysa ee aayaha siyaasadda uu weli saaranyahay Isimmada. Sidaas awgeed, murashaxiinta bayaankan saxiixay, waxay ku baaqayaaan qabsoomidda Shirkii Isimmada ee uu gogoshiisa dhigay ku-simaha Boqorku, welina aan la laabin..
In kasta oo nidaamka doorashada ee hab beeleedka ku dhisan aaney si toos uga gayb-gelayn dadweynuhu, waxaa haddana hubaal ah in xildhibaannada wax dooranaya ay ka soo jeedaan qaybaha bulshada iyo degaannadda Puntland oo dhan, sidaas awgeedna ay lagama maarmaan tahay in ay saamayn ku yeeshaan natiijada. Siyaabaha dadweynahu saamaynta ugu yeelanayo natiijada doorashada waxaa ka mid in la abaabulo fagaare murashaxiintu ku soo bandhigayaan afkaartooda muddo ka hor maalinta doorashada. Fagaarahaasi waa inuu ahaado mid dhex-dhexaad ah murashaxiintana loo dejiyo jadwal iyo wakhtiyo isku mid ah. Hadal jeedinta murashaxiinta waa in si toos ah looga baahiyo isgaarsiinta Tvda iyo idaacadaha una furnaato su?aalaha dadweynaha.
Guddigii Xallinta Khilaafaadka ee Golihii shacabka ee koowaad waxaa la qabtay doorashadii madaxweynaha ka dib iyo marki ay kale tageen shirweyinihi dastuuriga ahaa iyo isimaddii kor-joogtaynayey socodka shirweynaha. Sidaas awgeed, ma jirin wax diidma ah oo ka hortimi inuu magacaabo madaxweynihii markaas la doortay. Dororashadii labaad, waxaa jirey murashixiin uu hormuud ka ahaa Madaxweyne faroole oo ka hor yimi in madaxweynihii markaas xilka hayey uu magacaabo guddigaas.
Dhex-dhexaadin Isimadda iyo xubnihi uu magacaabay madaxweynihi markaas oo ahaa muwaaddiniin bulshada sumacad ku leh, aqlabiyaddii murashaxiintuna waa ay ku qanceen. Doorashadii saddexaad oo ahayd tii lagu doortay madaxweyne Faroole, in madaxweynihi xilka hayey uu magtacaabo guddigaas waxaa ka hor yimi murashaxiin uu afhayeen u ahaa madaxweynaha hadda xilka haya, ugu dmabaytiina waa la wada magacaabay.
Ciidammada Daraawiishta iyo Booliska muddo ayay mushahar la?aan ahaayeen waxaana jira culays dhaqaale oo ay la il-daranyihiin. Sidaas awgeed waxaa lagama marmaan ah in ciidammada aminga la siiyo dhammaan mushaharooyinka ay ku leeyihiin maamulka. Ciidanka Caasimada laga
bilaabo 1da Nov. cidda keliya ee lagu hallayn karo waa ciidanka
daraawiishta iyo taliskooda uu madaxda ka yahjay Gen.Siciid Maxamad Xirsi (Siciid Dheere). Tirada, nooca hubka iyo hab-dhaqanka ilaalada gaarka ah ee murashaxiinta, oo uu ku jiro Madaxweynuhu, waa in la isla cayimo taliyaha Daraawwishtuna uu la socodo dhaq-dhaqaaqooda.